Qipao Nke Oge A
Mọnde 18 Ọktoba 2021
Qipao Nke Oge A N'ike mmụọ sitere na China Relics, “Ceramics” bụ ihe nnọchite kacha ama ama nke kacha ewu ewu n'agbanyeghị na ndị eze na ndị mmadụ. N'ime ihe omumu m, ọbụlagodi taa ụkpụrụ ọkọlọtọ Chinese Aesthetic nke ejiji na Feng Shui (ime ụlọ na gburugburu ebe obibi) agbanweghi. Ha na-enwe mmasị ịhụ-anya, na-akpụ akpụ ma na-achọ ihe. Ọ ga-amasị m ịchepụta otu Qipao iji weta echiche na njiri mara nke ceramik site na usoro ochie gaa na nke oge a. Na-akpasu ndị mmadụ echefuru ọdịbendị ha na agbụrụ ha oge ọ bụla anyị nọ n’ọgbọ.
Mbọsị Ụka 17 Ọktoba 2021
Brooch Onye ọ bụla nwere ihe pụrụ iche na nke mbụ. Nke a pụtara ìhè ọbụlagodi n'ụkpụrụ mkpịsị aka anyị. Draped edoghi na akara nke aka anyị bụkwa ezi mbụ. Na mgbakwunye, onye ọ bụla nwere ọtụtụ okwute, nke nọ ha nso na mma ma ọ bụ jikọọ na ihe omume onwe onye. Ihe njirimara ndị a niile na-enye onye na-ahụ ihe na-eche ọtụtụ ihe mmụta ma mara mma, nke na-enye ohere ịmepụta ọla aka nke aka dabere na ahịrị na akara nke ihe ndị mmadụ. Kinddị ihe ịchọ mma a na ụdị ịchọ mma - na - etolite Usoro Nkà nke Onwe gị
Fraịdee 15 Ọktoba 2021
Wenezdee 13 Ọktoba 2021
Haezer Art Album Art Mọnde 29 Novemba
Up Nchịkọta Nke Ụlọ Ịsa Ahụ Mbọsị Ụka 28 Novemba
Il Mosnel QdE 2012 Mpempe Akwụkwọ Na-Egbu Egbu Na Mkpọ Mmanya Satọdee 27 Novemba
Qipao Nke Oge A Brooch Ihe Ịchọ Mma Jewelery Ọla Akwa Tactile